एप्पल प्याटेन्ट एक दबाव संवेदनशील टच आईडी विवरण। बिदाइ सुरु बटनमा? | आईफोन समाचार
एप्पल प्याटेन्ट एक दबाव-संवेदनशील टच आईडी विवरण। बिदाइ सुरु बटनमा?
आज नयाँ एप्पल प्याटेन्ट यसले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई शान्त छोडदैन। यसले सुझाव दिन्छ कि भविष्यका आईफोनहरूले होम बटन प्रयोग गर्न जारी राख्दछ ... वा होईन। के वर्णन गरिएको छ एक को कुरा गर्दछ टच आईडी जो दबाव संवेदनशील हुनेछ, एप्पल वाच वा यसको दोस्रो जेनेरेशनको फोर्स टच जस्तो, थ्रीडी टच आईफोन s एस र आईफोन s एस प्लसमा अवस्थित छ। यस बिन्दुमा, पक्कै पनि तपाईंहरू धेरैले म जस्तो सोच्दै हुनुहुन्छ: र तिनीहरूले पर्दामा समावेश गर्न सकेनन्?
प्याटेन्टको नाम राखिएको छ "फिंगरप्रिन्ट सेन्सर बल संवेदनशील इनपुटको साथ»र एक संयन्त्र र मामिलाहरू वर्णन गर्दछ कि एक दबाव संवेदनशील सतह बायोमेट्रिक सुरक्षा सेन्सरमा एकीकृत गर्दछ, जसको मतलब यो हो कि यो समान बिन्दु थ्रीडी टच टेक्नोलोजी र टच आईडी। टच आईडीमा स्वाइप गेस्चरहरू प्रदर्शन गर्ने क्षमता: एप्पलले अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेको नभएको कार्यमा यी सबै थप्नेछ।
प्याटेन्टले भर्खरको आईफोन मोडेलहरूमा प्रयोग गरिएको थ्रीडी टचमा प्रयोग गरिएको प्रणालीसँग मिल्दो जुल्दो विवरणहरू दिन्छ। एप्पल वाचको फोर्स टच मेकानिजमको विपरित, जुन स्क्रिनको परिधि वरिपरि एकीकृत बिभिन्न इलेक्ट्रोडहरूमा आधारित हुन्छ, थ्रीडी टच र यस प्याटेन्टमा के विस्तृत समावेश हुन्छ कप्यासेटिभ सेन्सर प्यानल आईफोनको ब्याकलिट रेटिना HD प्यानलको साथ एकीकृत।
टच आईडीको मामलामा, यो नयाँ टेक्नोलोजीले अनुमति दिनेछ, उदाहरणका लागि, एक ट्यापको साथ आईफोन अनलक गर्नुहोस् (डूब नगरी) एक दर्ता औंलाले टच आईडी, बटन डूब्दा हामी टर्मिनल अनलक र पहिले कन्फिगर गरिएको अनुप्रयोग खोल्नेछौं (यस प्याटेन्टको साथ स्टार्ट बटन हटाउने विचारको साथ नरकमा ...)। थ्रीडी टचको साथ, दबाबमा निर्भर गर्दै, बिभिन्न आदेशहरू सुरू गर्न सकिन्छ (यससँग, आशा फिर्ता), जस्तै भर्खरको सन्देशहरूको जवाफ दिन।
हामी जहिले पनि भन्छौं, कि प्याटेन्ट फाइल गरिएको छ भन्दैमा यो हामी कुनै पनि उपकरणमा देख्ने छैन, तर यसले कम्पनीमा के काम गर्छ भनेर बताउँछ। निस्सन्देह, यो कल्पना गर्न अपरिहार्य छ कि उनीहरूले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर थ्रीडी टचको साथ एकीकृत गरे र अन्तमा त्यस बटनलाई हटाए जुन धेरै धेरै दु: ख र कष्टले हामीलाई पार गर्यो। बटन डुब्नुको मुद्दाको अर्थ यो मात्र हुन सक्छ कि यसलाई कडा थिचिएको छ, जस्तो कि हामी अब सर्टकट वा पीक एन्ड पपका लागि गर्छौं। तपाईलाई के लाग्छ? के तपाईंले यो सम्भव देख्नुभयो?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » एप्पल प्याटेन्ट एक दबाव-संवेदनशील टच आईडी विवरण। बिदाइ सुरु बटनमा?
म सिफारिस गर्दछु कि जसले यो पोष्ट लेख्यो उनीहरुको उपकरण अधिक प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि यो सम्भव छ,
हालको सेन्सरले तपाईंको फिंगरप्रिन्ट पढ्छ यसलाई "डुब्न" को आवश्यकता बिना
नमस्ते मिगुएल। मैले लेख्ने जानकारी प्याटेन्टमा विस्तृत छ। अहिल्यै, टच आईडीले आईफोन अनलक गर्न सक्दछ बटन सँधै निराशा बिना नै र जब स्क्रिन केही बेर उठ्छ। वा, के समान छ, स्क्रिन बन्दको साथ, यदि हामीले औंला राख्यौं भने यसलाई अनलक हुँदैन। हामीले स्लीप बटन थिच्नु भन्दा पहिले वा बटन सिंक गर्नुपर्दछ।
यस प्याटेन्टमा वर्णन गरिएको कुराको साथ, यसलाई डुब्न आवश्यक पर्दैन। केवल स्क्रीन बन्द संग शीर्ष मा राख्नुहोस्। र यदि हामी अधिक वा कम बलको साथ प्रेस गर्छौं, विभिन्न कार्यहरू गर्नुहोस्।
यदि यो प्रेशर सेन्सरको लागि हैन भने यो VirtualHome चिमूटको रूपमा पनि मान्य छ। यसले बटनको जीवन विस्तार गर्न धेरै मद्दत गर्दछ
त्यसमा तपाईं ठीक हुनुहुन्छ, मात्र चीज जुन एप्पलले उनीहरूको अण्डाबाट बाहिर आउँदैन, टच आईडी कोड परिमार्जन गर्नुहोस् ... किन तिनीहरू ***** कोडका रेखाहरू हुन् जुन भिटुअलहोम परिमार्जन गर्दछ ...
एप्पलले भिर्नेटएक्सलाई $ million२ pay मिलियन तिर्ने सजाय सुनायो
Google लाई सब भन्दा बहुमूल्य कम्पनी हुन दुई दिन मात्र लाग्छ